Science | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
The Secrete Line of Scientific Progress Scientists are trying to make research to know the natural phenomena. Due to their perseverance, they knowalot of natural events than the previous conditions. The essence of their progress is … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged English Posts, Science	| Leaveacomment
Something about Scientific Knowledge
Something about Scientific Knowledge Scientific knowledge is based on practical experience. Scientists are all the time doing their works with experimental research. From the experience they make assumption, and finally they make hypothesis so their knowledge is based on … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Science	| Leaveacomment
A Strange Proposition in the Scientific Research
Posted on August 26, 2014 by chitnge
A Strange Proposition in the Scientific Research A Strange Proposition in the Scientific Research We all know that scientific theories are verifiable. This means: everybody can make testing about it. After the testing, if the prediction of the theory is … Continue reading →
ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ စကြဝဠာကို သိနားလည်ရန် ကြိုးစားခြင်း၌ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အထူးဇွဲကောင်းကြသည်။ ထိုသိပ္ပံပညာရှင်များ စာရင်းတွင် ဟော့ကင်းလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ (I enjoy explaining science and answering questions.) ဟော့ကင်းသည် သိပ္ပံနှင့်ပတ်သတ်၍ ရှင်းပြရတာ၊ သိပ္ပံနှင့်ပတ်သတ်၍ မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရတာ လွန်စွာနှစ်ချိုက်ကြောင်း ဖော်ကြူးခဲ့သည်။ ဟော့ကင်းသည် ဇွဲကောင်းလွန်းသဖြင့် ဤသို့ပင် Tags: BLACK HOLE, Science
Posted in Articles	| Tagged BLACK HOLE, Science	| Leaveacomment
ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျုး အပိုင်း(၂) မေး။ ။ဆရာကြီး ရောဂါက သေဖို့အတွက် အင်မတန် နီးစပ်တယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် ဆရာကြီး ဘယ်လိုခံစား ခဲ့ရပါသလဲ?? ဖြေ။ ။ကျွန်တော် ပထမတော့ စိတ်ပျက်ရမလိုလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရောဂါက ပိုဆိုးတာမျိုး သိပ်မရှိဘူး၊ နှေးနေတာကို တွေ့ရတယ်၊ ဒီတော့ ကျွန်တော် PhD ကိုလည်း ရအောင်လုပ် ခဲ့တယ်။ ရောဂါရဲ့ ဆိုးဝါးမှုဟာ တော်တော်နှေးနေတာကို သိလာတာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ တစ်ခါတည်း စကြဝဠာကြီးရဲ့ အရင်းအဖြစ်ကိုရှာဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Radiation, Science, Stephen Hawking	| Leaveacomment
Posted on October 27, 2013 by chitnge
သိပ္ပံ၏လျှို့ဝှက်ချက် သိပ္ပံ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ထဲတွင် Logical ဟူသော ယုတ္တိဗေဒနည်းကျ ဆက်စပ်မှု၊ Physical ဟူသော ရုပ်ဝတ္ထုကျကျ သာဓကရှိခြင်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် Technical possibility ဆိုသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်တန်ရာရှိမှု လျှို့ဝှက်ချက်များ ရှိသည်။ ပထမဖြစ်သော Logical လျှို့ဝှက်ချက်နည်းမှာ non-contradictory character ဟူ၍ သတ်မှတ်ကြသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဆန့်ကျင်သော အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးကဲ၍ မဖော်ဆောင်ရန် ဟူသော လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို non-contradictory character ဟူ၍ Tags: A … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged A Brief History of Time, Science	| Leaveacomment
အမှန်သစ္စာကိုကမ္ဘာကမသိကြဘူး ကမ္ဘာကမသိကြဘူး – တကယ်တော့ အမှန်သစ္စာကိုကမ္ဘာက မသိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ပိုးဟပ်စားတာ ပြိုင်ကြတာပေါ့ … အမှန်သစ္စာ သိဖို့ဆိုတာက မြန်မာပဲရှိတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ အမှန်သစ္စာကို သိတယ်။ ခက်တာက သိပ္ပံပညာက လွှမ်းမိုးနေတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ပြောရတာ နားမဝင်ကြဘူး။ အမှန်ဖြစ်ပေမယ့် နားမဝင်ကြဘူး။ ဒီကိစ္စ စိတ်မကောင်းစရာဘဲ ဒါပေမယ့် အမှန်က အမှန်ပဲဆိုတော့ အမှန်ကိုပဲ ပြောမိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျင့်ဖူးတာပဲ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ဖူးတာပဲ၊ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်၊ လက်တွေ့လည်းကျင့်တယ်။ … Continue reading →